Kedu ihe ị ga-eme na La Palma? Ncheta, osimiri na eke ebube | Akụkọ njem
Ihe ị ga-eme na La Palma bụ ajụjụ ọtụtụ ndị njem na-eleta Agwaetiti Canary. Ihe kpatara ya bụ na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mara amara nke agwaetiti ma ọ bụ, ma ọ dịkarịa ala, otu n'ime ndị njem nleta kacha nta na-enweta na njedebe nke afọ.
Atụlere yana Tenerife (lee, anyị na -ahapụrụ gị akụkọ gbasara Tenerife) ma ọ bụ Gran Canaria, Agwaetiti mara mma", dị ka a makwaara, ndị na-achọ ezumike n'àgwàetiti ahụ mara mma adịchaghị abịakarị. Otú ọ dị, ọ bụ ihe ịtụnanya eke nke kwesịrị ka a mara ya Reserve Banyere Ebe Ọgwụ na o juputara na ebe na-adọrọ mmasị. Maka ihe a niile, anyị ga-egosi gị ihe ị ga-eme na La Palma. Otú ọ dị, ị ghaghị iburu n'uche na mgbawa nke ugwu ugwu Cumbre Vieja nwere ike ịkwụsị otu n'ime ebe ndị a. N'ọnọdụ ọ bụla, dịka ihe omume lava akwụsịbeghị, anyị ga-agwa gị gbasara ha niile.
1 Ihe ị ga-eme na La Palma: site na okike ruo n'obodo nta
1.3 Nwee obi ụtọ n'akụkụ osimiri: Ihe ọzọ dị mkpa ime na La Palma
1.4 Ala dị larịị nke Aridane
1.5 El Paso, ihe ọzọ ị ga-eme na La Palma
1.6 Ọ bụ Santa Cruz de La Palma
Ihe ị ga-eme na La Palma: site na okike ruo n'obodo nta
Anyị ga-amalite nyocha anyị nke ihe anyị ga-eme na La Palma site n'ịgwa gị gbasara ịma mma ya, ma n'ụsọ oké osimiri ma n'ime ime obodo, wee lekwasị anya na obodo ndị Canarian kachasị mma na nke ọma. Ka anyị soro ya gaa.
Echiche nke Caldera de Taburiente
Ugwu mgbawa nke oge ochie nke hapụrụ olulu mmiri dị kilomita asaa n'obosara bụ otu n'ime nnukwu akara nke agwaetiti ahụ. Ugbu a, ọ na-etolite, ya na gburugburu ya, na eke Park Ọ na-aza aha ya ma dị n'etiti La Palma.
N'ezie, ọ ogide dị otú ahụ a nnukwu elu ebe na, n'ime, i nwere ike ịhụ ọtụtụ ụzọ nke trekking. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-adụ ọdụ ka ị ga-esi na ọdụ ụgbọ ala La Viña gaa na echiche nke Brecitos, ebe ị ga-atụgharị uche pụrụ iche.
Na mgbakwunye, n'oge nleta gị na ogige ahụ, ị ​​​​ga-enwe ike ịhụ ọmarịcha osisi na anụ ọhịa. Banyere nke mbụ, e nwere ọtụtụ osisi pine Canarian na amagante, ma ụdị agwaetiti dị iche iche. Na, n'akụkụ ha, ndị laurel, ụdị nke a na-echekwa ugbu a naanị na mpaghara biogeographic nke Macaronesian.
Banyere anụ ọhịa nke Caldera de Taburiente, ụmụ ahụhụ na-ejupụta. Scolopendra na wolf ududo na-abụkarị ụdị. Ma, ihe e ji mara ebe ahụ bụ ebe endemic nke agwaetiti ahụ nke bi n'ọgba na puku mita abụọ n'ịdị elu. Ị ga-ahụkwa kestrel, oke bekee, nwamba anụ ọhịa ma ọ bụ atụrụ Barbary na ogige ahụ.
Echiche dị na Roque de los Muchachos
Ọ bụ ezie na etinyere ya na mpaghara Caldera de Taburiente, anyị ga-agwa gị iche maka elu a dị mita 2426, nke abụọ kachasị elu na agwaetiti Canary ka e mesịrị. Ugwu Teide. Na mgbakwunye, aha gị ga-ada nke ọma n'ihi na n'elu bụ otu n'ime astronomical ememe kacha mkpa na Spain.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na sayensị a, anyị na-adụ ọdụ ka ị rịgoro ugwu ahụ, ọ bụghị nanị n'ihi ịdị elu, kama n'ihi na mbara igwe na-apụta ìhè karịsịa na mpaghara ahụ. Ị ga-anụ ụtọ dị ka nwatakịrị na-ekiri kpakpando ndị na-agbapụ na ihe ndị ọzọ dị na mbara igwe.
Kpọmkwem, Roque de los Muchachos na-emechi Caldera de Taburiente nke dị n'akụkụ ugwu ya wee guzobe ya, nke ọma, ya na lava nke ugwu mgbawa na-ebupụta. Enwere ọtụtụ ụzọ na-eduga n'elu ya. Dịka ọmụmaatụ, ndị nke Isi iyi Ọhụrụ na Olen. Mgbe ị na-arịgo, ị ga-ahụ ka ahịhịa ndụ juru na-esi na-eme ka nkume ndị na-adịghị na ya pụta. Na, ozugbo elu, ị nwekwara ike ịhụ ọmarịcha echiche nke La Palma. Ọbụna mgbe e nwere ezi visibiliti, agwaetiti nke Tenerife, Gwè ahụ y La Gomera.
Nwee obi ụtọ n'akụkụ osimiri: Ihe ọzọ dị mkpa ime na La Palma
Agwaetiti mara mma na-enyekwa gị ọmarịcha osimiri. A na-eji ájá ojii na-agbọpụta ọkụ na-agbọpụta ọkụ, ma ọ dị mma maka ịsa ahụ na-atọ ụtọ na maka ịwụ anyanwụ mgbe ị gara na ọmarịcha La Palma.
N'ime ha, anyị nwere ike ikwu na Los Cancajos Beach, nke dị naanị kilomita abụọ site n'isi obodo agwaetiti ahụ ma nwee ntụsara ahụ niile. Tụkwasị na nke ahụ, ọ nwere mmiri na-agbaji eke nke na-eme ka mmiri ya dị jụụ. N'otu aka ahụ, ịba ụba nke ala mmiri ya na-eme ka ọ bụrụ ihe zuru oke maka ịme mmiri mmiri.
Anyị na-akwadokwa nke Tazacorte osimiri, ezigbo maka ezinụlọ; nke Nogales, n'ụkwụ nke nnukwu ọnụ ọnụ ugwu; nke Puerto Naos, na njem ya, ma ọ bụ nke Green puddle, nke nwere ọrụ niile.
Otú ọ dị, ihe ịmatakwu bụ veta osimiri, nke dị n'okpuru nnukwu ọnụ ọnụ nkume nke nwere ụlọ ndị e wuru n'ime nkume ahụ n'onwe ya. Ị hụla ya na mmemme telivishọn n'ihi na ọ bụ otu n'ime ebe a na-ahụkarị na La Palma.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ọdọ mmiri, ị nwere ọtụtụ n'àgwàetiti ahụ. N'ime ha, ndị nke The Girdle, nke na-erite uru nke nkume na mmiri nke oké osimiri na nke Mmiri mmiri na-acha anụnụ anụnụ, nakwa mmiri. Ọbụna ị nwere osimiri osimiri dị na Caldera de Taburiente n'onwe ya ka ọ dị jụụ mgbe ị gachara ogologo njem.
Ozugbo anyị gwara gị gbasara ihe ndị dị ebube dị n'okike ya, anyị ga-elekwasị anya n'ihe ọzọ ị ga-eme na La Palma: ịchọpụta obodo ya, jupụtara na amara na ihe ncheta mara mma.
Ala dị larịị nke Aridane
Ụlọ Nzukọ Obodo nke Llanos de Aridane
N'aha uri a, a maara otu obodo dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke àgwàetiti ahụ mara mma. Ọ bụ obodo ya kacha bi na ya, ihe dị ka puku mmadụ iri abụọ bi ma nwee ọtụtụ ebe mmasị anyị ga-egosi gị.
Ya na-elekọta mmadụ nucleus bụ Ogige Spain, nke a na-achọ mma na laurels iri na otu nke ndị Indies na ọtụtụ nkwụ eze ndị e si Cuba butere. N'ime ya bụ ụlọ ndị kasị anọchite anya obodo. Banyere ndị a, anyị na-adụ ọdụ ka ị hụ Ụlọ Nzukọ Alaeze, ụlọ mpaghara na usoro ọdịnala nwere mbara ihu ya.
Kwesịrị ị na-eleta ndị ụka nke Our Lady of the Remedies, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX. N'ịma mma mpụga ya, ọ na-agbakwunye ọtụtụ akụ dị n'ime. Ya mere, ihe osise flamenco nke Virgen de los Remedios na Cristo de la Salud, nke ndị Tarasco India nke Mexico mere na ọka ọka.
N'aka nke ọzọ, na mpaghara nke Larịị nke ArgualỊ nwere ike ịhụ ọtụtụ ụlọ ndị e wuru na narị afọ nke XNUMX na XNUMX. N'ime ha, ụlọ Vélez de Ontanilla na ụlọ Massieu Van Dalle. N'ikpeazụ, mgbe ị gafesịrị echiche nke dị na Plaza de los Cuatro Caminos, ya na mosaics ya, bịaruo nso nso. Benhoarita Archaeological Museum, nke a raara nye obodo La Palma.
El Paso, ihe ọzọ ị ga-eme na La Palma
Ụlọ ihe nkiri nke Virgen del Pino
Ọ bụrụ na nke mbụ bụ obodo kacha biri na agwaetiti ahụ, nke a bụ nke kacha ukwuu. N'ezie, akụkụ buru ibu nke Caldera de Taburiente bụ nke ya, ma dịka ọchịchọ ịmata ihe anyị ga-agwa gị na ọ bụ naanị ya na-enweghị oke osimiri. Akụkụ dị mma nke akwụkwọ akụkọ ya bụ ugwu ugwu, yana ọnụ ọnụ ya dị ka nke Mgbakọ ochie ma ọ bụ Bejenao kacha elu.
Osisi pine ndị Canarian jupụtakwara na ya. Kpọmkwem, nso na Ụlọ ihe nkiri nke Virgen del Pino, onye nlekọta nke obodo, bụ osisi kasị ochie nke ụdị a n'àgwàetiti ahụ, nke dị ihe dị ka narị afọ asatọ. Ọ bụkwa otu n'ime ndị kasị ibu, ebe ọ nwere radius nke 120 centimeters na elu 32 mita.
Kwa afọ atọ, a na-agbada Virgen del Pino n'usoro n'usoro Churchka nke Nwanyị anyi nke Bonanza, n'isi obodo. Nke a bụ obere ụlọ nsọ sitere na narị afọ nke XNUMX pụtara ìhè maka ịma mma ya. Mgbe ọ nọrọ otu ọnwa n'ime ya, a na-ebugakwa ihe oyiyi nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ọzọ na ebe obibi ya iji mee ememe ya na mmalite September.
Ugbua na narị afọ nke iri abụọ na ụka ọhụrụ nke Our Lady of Bonanza, buru ibu karịa nke gara aga na n'ụdị neo-gothic. N'ikpeazụ, anyị na-adụ ọdụ ka ị hụ ụlọ nke Ụlọ Nzukọ Alaeze, nke Ụlọ ihe nkiri Monterrey na Ụlọ ihe ngosi nka silk.
Ọ bụ Santa Cruz de La Palma
Tọrọ ntọala na 1493 n'okpuru aha ịma mma nke Villa de Apuron, ọ bụ isi obodo nke agwaetiti ahụ. N'agbanyeghị obere nha ya, o nwere Ọgaranya Renaissance na ihe nketa Baroque. Ọtụtụ n'ime ya gbadoro gburugburu Ogige Spain, ebe ị nwere ike ịhụ Ụlọ Nzukọ Alaeze, nne ụka El Salvador na ọtụtụ ụlọ ndị aristocratic.
Ị ga-ahụkwa ọtụtụ ihe ncheta nke mmasị na ezigbo okporo ámá, isi akwara nke ndị mmadụ. N'ime ha, anyị na-adụ ọdụ ka ị lee anya n'obí Sotomayor na ụlọ Salazar. Maka akụkụ nke ya, na Avenida Marítima, ọmarịcha ụlọ ọdịnala ya nwere mbara ihu ga-adọta uche gị.
Ọzọkwa, na Santa Cruz ị ga-agarịrị nnukwu ụlọ nke Santa Catalina na San Fernando na ụka nke Santo Domingo na San Francisco. Nke ikpeazụ a jikọtara ya na ebe obibi ndị nọn nke Dominican nke nwere taa ụlọ ihe ngosi nka Insular.
N'ikpeazụ, na akụkụ elu nke isi obodo bụ Royal Sanctuary nke Virgen de las Nieves, onye nlekọta senti nke La Palma. Dị ka ọ dị na Virgen del Pino, a na-agbadakwa ọnụ ọgụgụ a n'usoro n'okporo ámá nke obodo ahụ. Kpọmkwem, a na-edobe ya n'ụlọ ụka nne nke El Salvador ma weghachi ya n'ụlọ nsọ ya na Ọgọst XNUMX, ụbọchị emume ya.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị ụfọdụ ihe kacha mma ịme na La Palma. Mana ị nwere ọtụtụ ohere ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, gaa na Mugcut, na ya mara mma hermitage nke San Miguel, ma ọ bụ garafia, ebe ọgba aghara dị na La Zarza na La Zarzilla, nke petroglyphs jupụtara na ya, na ihe ncheta okike nke Hiscaguán Coast, na ọnụ ọnụ ugwu ya dị egwu. Ị ezughị ezu ihe mere ị ga-eji gaa n'àgwàetiti Canarian a mara mma?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ihe ị ga-eme na La Palma n'agbanyeghị nkume mgbawa ugwu
Ọzara United States